Tag: nzaghachi imewe | Martech Zone
Tag: imewe nzaghachi
Abstract: Imekota, Version, na Handoff Ngwaahịa gị Designs
Anyị na ụlọ ọrụ mba na-arụ ọrụ ugbu a iji zụlite ndebiri email Cloud Cloud maka ngalaba ọ bụla na ngalaba azụmaahịa. Ebe ọ bụ na ndị ọ bụla, ndị ọrụ ngo, na ndị na-emepụta ihe niile dịpụrụ adịpụ, onye nrụpụta ahụ mepụtara njakịrị ya ma soro ndị otu ndu ya rụọ ọrụ na nsụgharị - wee nyefee ya ndị otu anyị maka nzaghachi na ntinye. Onye mmebe ahụ mere ka m mata Abstract. Abstract bu ngwa ahia na ntanetị maka Mac ebe ụlọ ọrụ gị, ndị ọrụ ngo,
Friday, February 10, 2012 Friday, February 10, 2012 Douglas Karr
Mgbe ị na-enyocha ụfọdụ ịdọ aka ná ntị oge a taa na ahịa akpaaka maka onye ahịa anyị, Right On Interactive, Marty Thompson bịara na njikọ njikọ na saịtị nyocha a na-akpọ Nyochaa. Ọ bụ ebe nnwale dị oke ọnụ nke nwere ọtụtụ atụmatụ yana ihu dị mfe, na-enweghị nghọta iji nweta atụmatụ gị, saịtị na nhazi gị wee nwaa nzaghachi. Lee bụ nyochaa nyochaa video: Nyochaa nwere usoro nyocha ndị a dị: Pịa Ule - Hụ ebe ndị ọrụ pịa
Aghota na agụ owuru: A Ga-enwerịrị maka Onye Azụmaahịa Mac
Na ọtụtụ ngwa azụmahịa na-agbapụ na Microsoft, Mac ka bụ ihe mgbu na butt iji gbaa ọsọ na ọnọdụ azụmahịa. Ihe kachasị ọhụrụ sistemụ arụmọrụ sitere na Apple na-enye ụfọdụ enyemaka na BootCamp, ngwa nke na-enye gị ohere ị nweta boot-Intel dabeere na Mac na OSX ma ọ bụ na Windows. Dual booting, n'ihi na ọtụtụ akụkụ, bụ n'ezie dị ka na-agba ọsọ abụọ dị iche iche kọmputa si otu ngwaike, ezie. Bootcamp dị mma, mana ịgbanwee azụ